सपनाको अर्थ - व्याख्या र आधिकारिक शब्दकोश
सर्पको सपना देख्नु भनेको के हो?
बच्चाको सपनाको अर्थ के हो?
मल विसर्जन वा पपको सपनाको अर्थ के हो?
शैतान वा प्रेतहरूको सपना देख्नुको मतलब के हो?
बोक्सी र जादूगरी सपना देख्नु भनेको के हो?
रुनुको सपनाको अर्थ के हो?
तपाई सपनाको अर्थ के हो तपाईलाई छुरा वा छुराले हिर्कायो?
पिसाब गर्ने सपनाको अर्थ
दाँतको सपना देख्ने अर्थ वा तपाईंको दाँत खस्ने अर्थ
तपाईलाई गोली हानिएको वा गोली लागेको छ भन्ने सपना देख्नु भनेको के हो?
तपाइँको भूतपूर्वको साथ फर्कनुभयो भनेर सपनाको अर्थ के हो?
पानीको सपनाको अर्थ के हो?
क्रिस्टल सफा पानीको सपना देख्नुको मतलब के हो?
फोहोर पानीको सपना देख्नु भनेको के हो?
सफा पानीको बारेमा सपना देख्ने अर्थ
माकुरोको सपना देख्नु भनेको के हो?
भेंडाको सपना देख्नु भनेको के हो?
बिच्छी वा बिच्छीको सपना देख्नु भनेको के हो?
ह्वेलको सपनाको अर्थ के हो?
साइकलको सपना देख्नु भनेको के हो?
फोहोर सपनाको अर्थ के हो?
नुहाउने सपनाको अर्थ के हो?
ककरोचको सपना देख्नु भनेको के हो?
कोरोनाभाइरसको सपना देख्नु भनेको के हो?
गोहीहरूको सपना देख्नु भनेको के हो?
चिहानको सपना देख्नु भनेको के हो?
यसको अर्थ चकलेटको सपना देख्नु भनेको के हो?
दाँतले सपनाको अर्थ के हो?
तपाईको दाँत झरेर सपना देख्नुको मतलब के हो?
डल्फिनको सपना देख्नु भनेको के हो?
ना naked्गो हुनुको सपनाको अर्थ के हो?
मुद्रा को बारे मा सपना को लागी यसको मतलब छ?
सिढीको सपना देख्नु भनेको के हो?
पार्टीको सपना देख्नु भनेको के हो?
भूतको सपना देख्नु भनेको के हो?
यो के सपना को अर्थ के हो?
राक्षसको सपनाको अर्थ के हो?
बिरालाहरूको सपना देख्नुको मतलब के हो?
टिकको सपनाको अर्थ के हो?
कुखुराको सपनाको अर्थ के हो?
गँड्यौलाको सपनाको अर्थ के हो?
H को साथ
अस्पतालको सपना देख्नु भनेको के हो?
कमिलाको सपना देख्नु भनेको के हो?
आफैंलाई मूर्ख बनाउने सपना देख्नु भनेको के हो?
अण्डाको सपनाको अर्थ के हो?
M को साथ
N को साथ
T को साथ
V को साथ
परिवार र साथीहरु
महिला र बच्चाहरू
के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ? व्याख्या र तपाईंको सपनाको अर्थ? के तपाईंले कहिल्यै त्यस्तो सपनाको बारेमा सोच्न रोक्नुभएको छ जुन आफैमा बारम्बार दोहोरिन्छ र तपाईंलाई आराम गर्न दिदैन? सुप्त जब तपाईंलाई सुत्न जब तपाईं लाई बताउन को लागी कोशिश गर्दै छ र हामी कसरी हाम्रो रातको विचारहरु को एक सही व्याख्या गर्न सक्छौं?
तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, तर रातमा हाम्रो दिमाग अझै सक्रिय छ र दिन कत्ति थकाइलाग्दो भयो त्यसको सपना देख्न सक्छ। अझ बढी, हामीसँग रहेका प्रत्येक सपनाहरू बिभिन्न छन्, ध्यानमा राख्नुहोस् सपनाहरूको अर्थ र यसको जटिल प्लटहरूको व्याख्या गर्न सिक्नु तपाईंलाई तपाईंलाई अझ राम्ररी चिन्न मद्दत गर्दछ।
अर्थको अध्ययन र सपना व्याख्या यो त्यस्तो चीज हो जुन बिहानको समयदेखि नै मानिसहरूलाई व्यस्त र पेची .्ग बनाएको छ। पुरातन समयमा सपनाको प्रतीकहरूको विवेकले २० औं शताब्दी र मनोविश्लेषणको विकासबाट ईश्वरीय सन्देश पत्ता लगाउन खोज्यो भने सपनाको व्याख्या मानव दिमागमा अचेत भण्डार गरिएको सामग्री वा दिनको चिन्ताहरू प्रकट गर्न प्रयोग भएको थियो। अरूलाई दुःख दिनुहोस्।
वर्तमानमा धन्यवाद प्रतिष्ठित मनोविश्लेषकहरू प्रसिद्ध जस्तो सिग्मन्ड फ्रेड, फ्रान्सेली जीन ल्यापलान्च र जीन-बर्ट्रान्ड पोन्टलिस वा स्विस कार्ल गस्टव जंग सपनाको व्याख्या गैर गम्भीर कुराको रूपमा देखिन छोडियो र क्लिनिकल टेक्निक भएको छ। यदि तपाइँ विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, यहाँ तपाईंसँग मेरो सन्दर्भ ग्रंथसूची र मेरो मनपर्ने लेखकहरूको लिंक छ.
1 हाम्रो विशेष शब्दकोशमा नि: शुल्क सपनाको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस्
2 आधिकारिक सपना शब्दकोश: व्याख्या अब तपाइँको लागि रहस्य हुनेछ
3 सपनाको व्याख्या गर्नुहोस् र यसको अर्थ के पाउनुहोस्
4 सपनाको व्याख्या बनाम
5 पुरातनतामा सपनाको व्याख्या
6 सपना के हो?
7 मनोविश्लेषण र फ्रायड को व्याख्या
8 कार्ल जंगको विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान
9 सपनाको अर्थ व्याख्या गर्न शब्दकोश
10 म को हुँ?
11 निद्राको अवस्था के हो?
11.1 चरण १: सुन्न अवस्था
11.2 दोस्रो चरण: हल्का निद्रा चरण
11.4 चरण IV: गहिरो निद्रा चरण
11.5 REM निद्रा चरण
12 सब भन्दा साधारण सपनाहरु
13 एक सपना राम्रोसँग सम्झन सल्लाह
14 सपनाको अर्थ
हाम्रो विशेष शब्दकोशमा नि: शुल्क सपनाको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस्
तलका प lines्क्तिहरूमा तपाईंले सूची फेला पार्न सक्नुहुन्छ AZ बाट आदेशित सपना अर्थहरू, तपाइँ वेबको उपयोग गर्न को लागी सजिलो बनाउन। यी सबै सपनाहरू सबैभन्दा प्रतिष्ठित लेखकहरूले व्यवहार गरेको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण सपनाहरूको संकलन र मैले अनुभव गरेको केही अनुभवहरू आधारित मेरो आफ्नै योगदानहरूका बीच एक मिश्रण हो जुन मैले अनुभव गरेको छु र मैले विश्लेषण गरेको छु र विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेको वर्षौं भइसक्यो।
यो एक धेरै पूर्ण सूची हो तर यो निरन्तर विकासमा जारी रहन्छ, यदि तपाईंसँग सपना छ जुन तपाईंलाई चिन्तित गर्दछ र त्यो आफैंमा दोहोरिन्छ र यो सूची मा प्रकट हुँदैन जुन तपाईं माग्नुहुन्छ वेबको सम्पर्क सेक्सन मार्फत मलाई सन्देश लेख्नुहोस् र म तपाईंको केस अनुसन्धान गर्नेछु र त्यो सपनालाई सूचीमा थप्नेछ ताकि अन्य प्रयोगकर्ताहरू यसको बारेमा जान्न सकून्।
सपना पत्ता लगाउने समय आयो जुन तपाईं चिन्तित हुनुभयो। यहाँ तपाईंसँग सूची क्रमबद्ध छ।
A सँग सुरु हुने सपनाहरू
कफिनको सपना देख्नु भनेको के हो?
यसको अर्थ कार, कार वा कारको सपना देख्नु भनेको के हो?
हत्या वा हत्याको सपना देख्नु भनेको के हो?
साथीहरूको सपना देख्नु भनेको के हो?
स्वर्गदूतहरूको सपना देख्नु भनेको के हो?
माहुरीको सपना देख्नु भनेको के हो?
सुईको सपना देख्नु भनेको के हो?
हवाइजहाजको सपना देख्नु भनेको के हो?
सपनाको अर्थ जुन माकुराले तपाईंलाई काट्यो
बी संग शुरू हुने सपनाहरु
स्लगहरूको सपनाको अर्थ के हो?
उल्लू र उल्लूको सपनाको अर्थ के हो?
बन्दुकको सपना देख्नु भनेको के हो?
कीरा र बगहरू देख्नको मतलब के हो?
नाचको सपनाको अर्थ के हो?
विवाहको सपनाको अर्थ के हो?
सी संग शुरू कि सपनाहरु
चक्कुको सपना देख्नु भनेको के हो?
शून्यमा खस्नुको सपनाको अर्थ के हो?
केराहरू देख्नु भनेको के हो?
काँडाको सपना देख्नु भनेको के हो?
कपालको बारेमा सपना
D बाट सुरु हुने सपनाहरू
यो झगडा वा बहस को सपना को मतलब के हो?
पैसा खोज्नुको सपना देख्नु भनेको के हो?
E बाट सुरु हुने सपनाहरू
तपाइँको पूर्व प्रेमी वा पूर्व प्रेमिकाको सपना देख्नु भनेको के हो?
हात्तीको सपना देख्नु भनेको के हो?
गर्भावस्थाको सपना देख्नु भनेको के हो?
सपनाहरू जुन एफसँग शुरू हुन्छन्
फेसबुकको सपना देख्नु भनेको के हो?
आगोको सपना देख्नु भनेको के हो?
फूलको सपनाको अर्थ के हो?
फलको सपना देख्नु भनेको के हो?
मृतक आफन्तहरूको सपना देख्नुको मतलब के हो
जी संग शुरू हुने सपनाहरु
एचसँग शुरू हुने सपनाहरू
मसँग सुरु हुने सपनाहरू
बाढीको सपना देख्नु भनेको के हो?
चर्चको सपना देख्नु भनेको के हो?
बेवफाई वा धोकामा परेको बारे सपना देख्नु भनेको के हो?
एल संग शुरू कि सपनाहरु
गँड्यौलाको सपना देख्नु भनेको के हो?
सिंहको सपना देख्नु भनेको के हो?
ब्वाँसोको सपना देख्नु भनेको के हो?
छेपारोको सपना देख्नु भनेको के हो?
वर्षाको सपनाको अर्थ के हो?
चक्रव्यूहाको सपना देख्नुको मतलब के हो?
कुञ्जीहरूको सपना देख्नु भनेको के हो?
सपनाहरू जुन M बाट सुरु हुन्छ
तपाईलाई मारिएको सपना देख्नु भनेको के हो?
हत्याको सपना देख्नु भनेको के हो?
बाँदरको सपना देख्नु भनेको के हो?
सुटकेसको सपना देख्नु भनेको के हो?
झिंगाको सपनाको अर्थ के हो?
मृत्युको सपना देख्नु भनेको के हो?
कसैको मृत्यु भएको सपना देख्नु भनेको के हो?
सिक्का र बिलहरूको सपना देख्नुको मतलब के हो?
एन संग शुरू सपनाहरु
संख्याको सपना देख्नु भनेको के हो?
पौडी खेल्ने सपनाको अर्थ के हो?
केटाकेटीको सपना देख्नु भनेको के हो?
हिउँको सपनाको अर्थ के हो?
O बाट सुरु हुने सपनाहरू
सुनको सपनाको अर्थ के हो?
विशाल छालहरूको सपना देख्नुको मतलब के हो?
Ohija सपनाको अर्थ के हो?
सपनाहरू जुन पीसँग शुरू हुन्छन्
महामारीको सपना देख्नु भनेको के हो?
जूँको सपना देख्नु भनेको के हो?
पौंडी पोखरीको सपना देख्नु भनेको के हो?
माछा वा माछाको सपनाको अर्थ के हो?
तपाईं पीछा भइरहेको वा पीछा भइरहेको छ कि सपना
पुलिसको सपना देख्नु भनेको के हो?
कबूतरको सपना देख्नु भनेको के हो?
रोटीको सपनाको अर्थ के हो?
सपना देख्नुको मतलब के हो कि कुकुरले तपाईलाई काट्छ
आर संग शुरू हुने सपनाहरु
चूहोंको सपना देख्नुको मतलब के हो?
लुगाको सपना देख्नु भनेको के हो?
टोड्स र भ्यागुताहरूको सपना देख्नुको मतलब के हो?
घडीको सपनाको अर्थ के हो?
यसको अर्थ के मुसाको सपना देख्नु हो?
नदीको सपना देख्नु भनेको के हो?
S बाट सुरु हुने सपनाहरू
रगतको सपनाको अर्थ के हो?
यसको अपहरणको सपना देख्नु भनेको के हो?
यो zombies सपना अर्थ के हो?
सपनाहरू जुन टीसँग सुरु हुन्छन्
शार्कको सपना देख्नु भनेको के हो?
गोरूहरू देख्नु भनेको के हो?
सुनामीको सपना देख्नु भनेको के हो?
भूकम्प वा कम्पनिको सपनाको अर्थ के हो?
बाघको सपना देख्नु भनेको के हो?
Tarantulas सपना को मतलब के हो?
कछुवाको सपना देख्नु भनेको के हो?
भूमि सपनाको अर्थ के हो?
आँधीबेहरी र तुफानको सपना देख्नुको मतलब के हो?
वी संग शुरू सपनाहरु
यात्रा वा यात्राको सपना देख्नुको मतलब के हो?
गाईको सपना देख्नु भनेको के हो?
ज्वालामुखीको सपना देख्नु भनेको के हो?
यसको उडान वा लिभिटेशनको सपनाको अर्थ के हो?
विवाहको पोशाकको सपना देख्नुको मतलब के हो?
बान्ता सपनाको अर्थ के हो?
भ्याम्पायरसँग सपना देख्नु भनेको के हो?
एक पटक निदाएपछि, हामी हाम्रो आकांक्षा र डरको चित्रण गर्दै साहसिक यात्रामा लाग्छौं। आराम गर्ने घण्टा दिनहुँको समस्याहरूको लागि अभियान हो, ती चिन्ताहरू जुन हाम्रो दिमागमा आक्रमण गर्दछन्, र त्यसैले यो बुझ्न आवश्यक छ सपना व्याख्या यसको अर्थ स्पष्ट गर्न।
आधिकारिक सपना शब्दकोश: व्याख्या अब तपाइँको लागि रहस्य हुनेछ
पुरानो समयमा, संस्कृतिहरूले प्रत्येक सपनाको अर्थ कसरी बुझाउने कोशिस गरे, केही रहस्यमय र गूढ दृष्टिकोणबाट, तर अरूले वैज्ञानिक विधि अनुसरण गरे। त्यो हो, कुनै पनि अन्य सभ्यता जस्तै, त्यहाँ उच्च सम्मानित चरलाटन्स र मनोवैज्ञानिकहरू थिए।
हाम्रो अवचेतनमा हुने सबै कुरा जब हामी सपनाको सपना देख्छौं यसले ब्यूँझिएको अवस्थाको बखत हामीले बुझ्न नसक्ने धेरै श doubts्काहरूको समाधान गर्न सक्छ। सायद यही कारण हो कि मानिसहरूले शताब्दियौंदेखि आफ्ना अर्थहरू पछ्याइरहेका छन् दिमागको बारेमा सबै कुरा जान्नुहोस् र आफ्नै व्यक्तित्व।
सपनाको व्याख्या गर्नुहोस् र यसको अर्थ के पाउनुहोस्
के हामीसंग साँच्चिकै सपनाहरु छन्? किन तिनीहरू हाम्रो महत्वाकांक्षा र डर प्रतिनिधित्व गर्छन्? किन अवचेतनले अविनाशी विचारहरू सिर्जना गर्दछ? कहिलेकाँही हामी सपनाको जटिलता देखेर छक्क पर्न सक्छौं। हामी सपना देख्छौं कि हामीले हाम्रो जागिर गुमायौं, परिवारको सदस्य मर्दछ वा हामी आफ्नो पार्टनरसँग बिच्छेद गर्दछौं। त्यो हो, तिनीहरू छन् हाम्रो वातावरण सम्बन्धित सपनाहरु, र कहिलेकाँही यति वास्तविक देखिन्छ कि हामी सपनाको सन्देशको अर्थ खोजी गर्दछौं जुन अवचेतनले हामीलाई पठाउँदछ। यदि तपाइँ खोजी गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँको सपनाहरूको सही व्याख्या कसरी गर्ने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
सपनाको व्याख्या बनाम
सपनाको अर्थ थाहा पाउनु भनेको यसको व्याख्या गर्ने जस्तो छैन। कुनै सपनाको सही व्याख्या कसरी गर्ने भनेर जान्नको लागि, तपाईंले यसको अर्थ राम्रोसँग जान्नुपर्दैन, तर तपाईंलाई अन्य महत्त्वपूर्ण विवरणहरू पनि जान्नुपर्दछ र प्रसंग जुन तिनीहरू हुन्छन्, सपनाको उही अर्थको फरक फरक व्यक्तिमा फरक फरक अर्थ हुन सक्छ किनकि यसले तपाईंको अर्थ, तपाईंको परिवार, तपाईंको वातावरण, तपाईंको प्रेम स्थिति, तपाईंको स्वास्थ्य वा पनी पनि मतलब गर्दछ तपाईंको आर्थिक अवस्था उदाहरण को लागी, यो उस्तै छैन सुनको सपना यदि तपाईं गरीब हुनुहुन्छ भने भन्दा धनी हुनुहुन्छ भने। अन्त मा सपना उस्तै छ, तर व्याख्या धेरै फरक छ।
पुरातनतामा सपनाको व्याख्या
ग्रीकहरू पहिले नै यस विषयमा रुचि राखेका थिए। तर त्यसबेला सपनाको अर्थ खुलाउने उनको प्रणाली मौखिक परम्पराले शासित थियो। भन्न खोजेको कुरा हो, ती सबै विचारहरू जुन पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा र अधिकमा पनि पारित गरिएको थियो भगवानहरूको इच्छा ती सपनाहरूमा के देखियो।
तर यो विश्वासको अर्को पक्षमा, लेखकहरूलाई मनपर्दछ दार्शनिक प्लेटो वा अरस्तु यस विषयमा उनीहरूले रिपब्लिक अफ द फर्स्ट र दोस्रो सपनाको सपनाजस्ता पुस्तकहरूमा पनि लेखेका थिए। त्यो कुरा बिर्सनु भएन, केही समय पछि पायथागोरसले पनि यस विषयमा अलौकिक प्राणीहरूको लागि सञ्चारको माध्यमको रूपमा बोले। जबकि Stoics प्रोविडन्स मा शर्त। पछि सिसेरो वा आर्टेमिडोरोको नयाँ राय आउनेछ।
सपना के हो?
हाम्रो वरिपरि के भइरहेको छ भनेर अनुमान लगाउन कोशिस गर्नु र सपनाहरु मार्फत सपना देख्नु हो। तर केवल सपनाहरू, किनकि जब त्यहाँ सपनाहरू समावेश थिए, यो भनिन्थ्यो कि भूतले उनीहरूलाई सुरु गर्‍यो र तिनीहरू विश्लेषण गर्न योग्य थिएनन्। यो सत्य हो कि सबै सिद्धान्तहरूको बावजुद यो छ भविष्यवाणी तकनीक, सिग्मन्ड फ्रायडको अध्ययनमा आधारित छ।
मनोविश्लेषण र फ्रायड को व्याख्या
फ्रायडको साथ आउने केहि विचारहरू वा अध्ययनहरूको आधारमा हामीले भर्खर नै उल्लेख गरेका थियौं। त्यो हो, तिनीहरू उपन्यास हुने थिएनन् किनकि उनीहरूमा परम्परा धेरै नै थियो। तर, यद्यपि यो विश्लेषण गर्न गाह्रो टर्म हो, तर यो भन्नु पर्दछ कि फ्रायड बिन्दु राख्न आए र अनुसरण गरे। म त्यो देखाउन चाहान्छु प्रतीक चिन्ह सपना मा प्रतिबिम्बिततिनीहरू हाम्रो दिमाग र बेहोशसँग सम्बन्धित थिए।
यस कारणले गर्दा, सपनाको विश्लेषण गर्दा, हामीले यसमा देखेका सबै अवधारणाहरू र विचारहरू लिनुपर्दछ र केवल एउटासँग रहनु हुँदैन। न त अन्धविश्वासी तरिकाहरू वा कुनै सुझावात्मक प्रकारको व्याख्या थप्न सकिन्छ। हाम्रो दैनिक जीवनको साथ लिंकहरू र सम्बन्धहरू पनि ठूलो सान्दर्भिक हुनेछन्। सबै सपनाहरु मध्ये, फ्रायडले हामीलाई "खास सपनाहरु" को नाम दिए जुन हामीलाई धेरै सम्झिन्छ। उदाहरण को लागी मृत्यु वा पतन संग सम्बन्धित। ती सबै पछि आन्तरिक द्वन्दलाई प्रकाशमा ल्याउन सक्छ। छोटकरीमा, उनले दाबी गरे कि सपनाहरु हाम्रो भित्री र हाम्रो लुकेका चाहनाहरु को लागी एक पथ हो।
कार्ल जंगको विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान
यदि हामीले फ्रायडको अध्ययन गरेका छौं भने यो सत्य हो कि हामीले जंगलाई पनि बिर्सदैनौं। उनी पहिलोको विचारबाट केही हदसम्म अलमल्ल परेका थिए तर स्विस मनोचिकित्सकले एक कदम अगाडी बढाए। मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा, उसको लागि सपनाहरू प्रकृतिको उत्पादन थिए। उसले हरेक दिन भ्रमका साथै आफ्ना बिरामीहरूका भ्रमका समस्याहरू देख्यो र यी थप सपनाहरूले ब्रशस्ट्रोक केहीलाई साझा गरे। पौराणिक कथाहरू.
त्यसैले त्यहाँ उनले महसुस गरे कि व्यक्ति बाँच्ने वा महसुस गरेको कुरासँग सधै सीधा सम्बन्ध हुँदैन। यसैले उनले यसलाई सामूहिक बेहोश भने। यो सबै एक प्रकारको व्यवहारिक प्रतीक हो जुन मानव अधिकारमा छ र जुन वस्तुलाई पुरानो प्रकार वा केही जैविक प्रवृत्तिको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। त्यसोभए छोटकरीमा भन्नुपर्दा, जंगले भनेको के हो त्यो हो हाम्रो अनुभवबाट सपनाको अर्थ हुन्छ र ती आत्माको आवश्यकताको लागि एक पुल हुनेछ।
सपनाको अर्थ व्याख्या गर्न शब्दकोश
जे होस् सपनाको एक राम्रो हिस्सा subjectivity द्वारा शासित छ, त्यहाँ एक धेरै परिभाषित अर्थ संग धेरै तत्वहरु छन्। यी तत्वहरूको सावधानीपूर्वक अनुसन्धानले ए मा सबै डाटा स collect्कलन गर्न सेवा पुर्‍यायो सपना शब्दकोश, एक पुस्तक जसको साथ कोही पनि तिनीहरूको व्याख्या गर्न सक्दछ।
यदि तपाइँमा रुचि छ सपनाको अर्थ के हो पत्ता लगाउनुहोस्, बुझ्नुहोस् कि उनीहरूले के प्रतिनिधित्व गर्छन् र तिनिहरूको प्रतीकहरू, हाम्रो सपना शब्दकोशको साथ तपाईं सम्पूर्ण जानकारी पूर्ण रूपमा निःशुल्क राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो अवचेतन सन्देश मार्फत आफूलाई अझ राम्ररी चिन्नुहुनेछ र तपाईंले आफ्नो वास्तविक चिन्ताहरूको कसरी व्याख्या गर्ने भनेर जान्नुहुनेछ। खुल्ला अर्थ-suenos.com तपाईं यसको अर्थ खोज्दै व्यक्तिगत आत्मपरीक्षण र आध्यात्मिक सुधारको गहिरा स्तरमा पुग्न सक्नुहुनेछ।
मेरो नाम Nacho Zarzosa हो र म यस वेबसाइटको पछाडि व्यक्ति हुँ। मसँग मनोविज्ञान मा डिग्री छ ओभिडो विश्वविद्यालय को मनोविज्ञान संकाय र सपना र मनोविश्लेषणको अर्थको बारेमा एक ठूलो जोशिलो। तपाईं मेरो बारेमा सबै जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
निद्राको अवस्था के हो?
निद्राको बिभिन्न चरणहरूका बारे जान्न हामीलाई धेरै बढी रमाइलो निद्रा दिन र अझ राम्ररी आराम गर्न मद्दत गर्दछ। यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीले सपनामा पनि धेरैलाई प्रभाव पार्छ, त्यसैले चरणहरू राम्रोसँग जान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
चरण १: सुन्न अवस्था
यो पहिलो चरण हो र समावेश गर्दछ पहिलो १० मिनेट निद्रा, जब हामी ब्यूँझिने अवधिको बीचमा हामी थोरै निन्द्रा नभएसम्म
दोस्रो चरण: हल्का निद्रा चरण
निद्राको दोस्रो चरणमाaलगभग निद्राको आधा कुल समयको अवधि र यो त्यस्तो चरण हो जहाँ तपाईंको शरीर बिस्तारै एकै समयमा वातावरणबाट बिच्छेद हुन्छ मुटुको दर र सास फेर्न ढिलो यो शान्त र बढी फुर्सतको हुन्छ। यस चरणमा हामीलाई ब्यूँझन धेरै गाह्रो हुन्छ, तर यसको बावजूद हाम्रो मस्तिष्कको ठूलो मस्तिष्क क्रियाकलापको चरण धेरै अन्य साना व्यक्तिहरूसँग वैकल्पिक हुन्छ। सामान्यतया जब हामी यस चरणबाट उठ्छौं हामी यसलाई चौंकाएर गर्छौं, उदाहरणका लागि जब हामी सपना देख्छौं जब हामी यात्रा गर्दछौं वा चट्टानबाट तल झर्छौं।
तेस्रो चरण सबै भन्दा छोटो हो, कम्तिमा २ वा minutes मिनेट चल्छ र हो हल्का निद्रा र गहिरो निन्द्रा चरणको बीचमा संक्रमण.
चरण IV: गहिरो निद्रा चरण
गहिरो निन्द्रा चरण २०% कुल निद्राको लागि रहन्छ र सबैमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले आरामको गुणस्तर र दिनको थकानबाट मुक्त हुन शरीरको क्षमता निर्धारण गर्दछ। श्वासप्रश्वासको दर एकदम कम छ र मुटुको चाप धेरै खस्छ त्यसैले यो अवस्थाबाट स्वाभाविक रूपमा ब्यूँझन हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ।
REM निद्रा चरण
REM निद्रा चरण हाम्रो निद्रा को २%% ओगट्छ। REM नाम अंग्रेजीमा रैपिड नेत्र आन्दोलनबाट आएको हो र यसको मतलब यो हो आँखा लगातार पलकहरू अन्तर्गत छन्। यस चरणको बेलामा दिमागको क्रियाकलाप एकदमै उच्च हुन्छ, लगभग हामी त्यतिखेर जाग्छौं जति नै स्तरमा हुन्छ तर एकै समयमा हाम्रो मांसपेशीहरू अवरुद्ध हुन्छन् जुन हाम्रो मस्तिष्कले प्रक्रिया गरिरहेको सबै जानकारीहरूमा प्रतिक्रिया गर्नबाट रोक्नको लागि हो। यस चरणको बखत निद्रा हुन्छ त्यसैले यो वेबसाइटमा खातामा लिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो।
सब भन्दा साधारण सपनाहरु
सबै सपनाहरू समान हुँदैनन्, त्यहाँ सपनाहरू छन् जुन धेरैले कष्ट भोग्छन्, उदाहरणका लागि आफ्नो भूतपूर्व सपनाको बारेमा वा पनि तपाइँको पूर्व मा फिर्ता जाने सपना, पानीको बारेमा सपना, मलको बारेमा सपना, उडानको सपना, बन्दुकको बारेमा सपना o शून्य मा गिर को सपना। जबकि अन्य दुर्लभ जस्तै छन् पुलिसको सपना हेर्नुहोस। एक अधिक सामान्य सपना वा एक विरर्ड सपना सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्न सकिदैन। त्यसरी नै, एक व्यक्ति मा एक weirder सपना अर्को मा सामान्य हुन सक्छ। यो यस्तो देखिन्छ, उदाहरणका लागि, पुलिसको बारेमा सपना देख्नु सामान्य छ यदि तपाईको काम प्रहरीसंग सम्बन्धित छ, जस्तै यदि तपाई बैंकमा वा अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ।
एक सपना राम्रोसँग सम्झन सल्लाह
के तपाइँ सपनाको सबै विवरणहरू राम्ररी याद गर्न चाहानुहुन्छ ताकि पछि तपाइँ यसको अर्थ फेला पार्न सक्नुहुनेछ? कागज र कलम सबै लेख्न के तपाईं आफ्नो सपना सम्झना छ रूपमा झट्टै तपाईं ब्यूँझनुहोस्। याद गर्नुहोस् कि कुनै पनि विवरण गणना गरिएको छ, किनकि यसको अर्थ राम्रोसँग व्याख्या गर्दा धेरै धेरै हुन्छ। पछि, जब तपाईं आफ्नो दिन समाप्त गर्नुहुन्छ, हाम्रो शब्दकोश प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसलाई राम्रोसँग बुझ्न प्रत्येक तत्त्वका प्रतीकहरूको अध्ययन गर्नुहोस्।
यस तरिकाले, तपाईं मात्र पाउनुहुनेछ सपना र तिनीहरूको अर्थ, तर तपाईं सिक्न सक्नुहुन्छ जूँको सपना देख्नु भनेको के हो वा काकरोचको बारेमा सपना देख्ने अर्थ, साथै अर्थ र पैसा को सपना को अर्थ र तपाईको मनको गहिराइमा राखिएको रहस्य पत्ता लगाउनुहोस्। अबदेखि तपाईसँग सपनाको अर्थ विश्लेषण गर्ने कुनै बहाना छैन र हरेक रात आफैलाई अझ राम्ररी चिन्न सक्नुहुन्छ।
सपनाको कसरी व्याख्या गर्ने
2022 XNUMX | अर्थ-suenos.com: सपनाहरूको औपचारिक शब्दकोश र व्याख्या Nacho Zarzosa द्वारा